Sopromer Niasa hatrany, tsy nisy fatiantoka
Orinasa roa izany izao no tsy miankina fantatra fa miasa ara-dalàna tamin'ity fihibohana ity.
Ny voalohany dia ireo orinasana fiambenana mampiasa "agent de sécurité" na irony mpitandro filaminana tsy miankina irony. Niasa hatrany izy ireny toy ny niambina tranon'olon-tsotra,tranom- bazaha, tranombarotra, orinasa. Tsy maharaka aza ny mpiasa raha ny vaovao azo. Ny faharoa dia ny orinasa tsy miankina mpivaro-trondro SOPROMER.Nanambara ny tompon'andraikitra ao fa tsy mitsahatra niasa izy ireo ary tsy nisy fampiatoana ny mpiasa ary voaray tsara ny karama. Manana sampana 43 izy manerana ny nosy ny Sopromer.